Cayaartoyda kubadda Cagta ee Hayland oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho +(SAWIRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Cayaartoyda kubadda Cagta ee Hayland oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho +(SAWIRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Cayaartooyda kubada cagta ee ka timid Haayland ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta soo gaaray garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho.
Waxaana halkaasi ku Soo dhaweyay Wasiiro ka tirsan XF Soomaaliya, mas’uuliyiin ka socotay qaar ka mid ah hay’addaha Dowladda Soomaaliya, Maamulka Gobalka Banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Gobalka Banaadir.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga Gobalka Banaadir Cali Yare Cali oo ka hadlay soo dhoweynta ayaa sheegay inuu rajeynayo in ay cayaartooydu la cayaaraan degmooyinka gobalka Banaadir.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federalka Soomaliya Cismaan Abokor Dubbe oo ka mid ahaa Wasiiradii soo dhoweysay ayaa sheegay in cayaaruhu yihiin caafimaad iyo is dhexgal bulsho Xukuumadduna ay dhiirigelineyso dhalinyarada Soomaaliyeed ee cayaaryahanada ah.
Ugu dambeyn, cayaartooyda ayaa ka kooban 30 iyo dhowr ruux oo ku matalayay Gobalka Hayland kuwaasoo dhowaan ku guuleystay Tartanka Koobka Kubadda Cagta iyagoo ka guuleystay Gobalka Nugaal.
Cayaartoyda kubadda cagta Hayland